ကောင်းမွန်ဝင်း: စကား နဲ့ ကစား မယ်
မြန်မာဘာသာ၊ ဂျပန်ဘာသာ၊ အင်္ဂလိပ်ဘာသာ၊ ကိုရီးယားဘာသာ၊ တရုတ်ဘာသာတွေမှာ ဒီလို ဝေါဟာရ၊ အက္ခရာ၊ ဂဏန်းသင်္ချာ တို့ကိုအသုံးပြုပြီး၊ မှတ်သားမှုများ၊ စကားဝှက်၊ ဥာဏ်စမ်းကစားနည်းများ သူ့ဘာသာရပ်အလိုက်ရှိနေတာက စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းလှပါတယ်။ ရှေးကသတ်မှတ်ခဲ့တာကို လက်ဆင့်ကမ်း မှတ်သားကြသလို ၊ မိမိတို့ဥာဏ်စွမ်းနဲ့လည်း တီထွင်နိုင်ပါတယ်တဲ့။
ပထမဦးဆုံးမြန်မာဘာသာမှာ လူသိအများဆုံးဥပမာတွေထဲကရွေးပါရစေ။ မြန်မာအက္ခရာကနေ နေ့နံဂဏန်းသင်္ချာအဖြစ် ဆက်စပ်ပြီးမှတ်ယူနည်းထဲက ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့။
အုတ်ကျစ်ကျော်အေး မန္တလေး =၁၂၂၁
ရွှေလသာ၊ ၀ါဝါ၀င်း = ၄၄၆
လှည်းဝင်ရိုးသံ တညံညံ၊ = ၄၄၄၆
ဂျပန်လို အက္ခရာကနေ ဂဏန်းသင်္ချာပြောင်းမှတ်ပုံ တွေထဲက လူသိများတဲ့ ဥပမာကတော့
ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ ကာမာ့ကူရာ့ ခေတ်စတင်ချိန် သက္ကရာဇ်ကို = အိအိခုနိ = いいくに= 1192
အိအိခုနိ ရဲ့ အဓိပ္ပါယ် “ကောင်းသောနိုင်ငံ” ၁၁၉၂ခုနှစ်မှာကောင်းသောနိုင်ငံတည်ထောင်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ မှတ်ယူတာပါ။
အပြန်အလှန် ဂဏန်းသင်္ချာ ကနေ အက္ခရာကိုပြောင်းပြီးမှတ်တာလည်းရှိပါတယ်။
အင်္ဂလိပ်လိုမှာလည်း အက္ခရာကနေ ဂဏန်းသင်္ချာကိုဆက်စပ်မှတ်သားကြတာတွေကို လေ့လာဘူးသလောက် ပြောရရင်တော့
အိမ်အရွှေ့အပြောင်းကုမဏီ တွေက သူတို့ရဲ့ ဖုန်းနံပါတ်ကို= 123-456-MOVE
အ၀လွန်အဆီချဆေးတွေရောင်းတဲ့ ကုမဏီကတော့ =123-456-SLIM
နွားနို့ရောင်းတဲ့ ဆိုင် ဖုန်းနံပါတ်က = 123-GOT-MILK
GOT- MILK =（468-6455）
အင်္ဂလ်ိပ်ဘာသာမှာပဲ၊ အက္ခရာကနေ အက္ခရာကိုပြန်ပြီးဆက်စပ်ပေးတဲ့ စကားဝှက် ကစားနည်းတစ်ခုကိုလည်း ဖတ်ဘူးပါတယ်။
အဒေါ်ကြီးတစ်ယောက်က ကွတ်ကီး (cookie )မုန့်ပုလင်းကိုကြည့်ပြီး အော်လိုက်တယ်တဲ့ ၊ သူအော်လိုက်တာကို အောက်ပါကွက်လပ်ထဲဖြည့်ကြည့်ပါ။ ၇လုံးထဲရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ရိုးစင်းတဲ့ ၀ါကျတစ်ကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။
အဖြေက အကွက်လေးတွေတစ်ခုစီကို ဆလက်(select) လုပ်ပြီး အသံထွက်ဖတ်လိုက်ရင်။ အဓိပ္ပါယ် ပါသိရပါလိမ့်မယ်။
☆⇒　Oh, I see, you are empty! =　အိုး၊ ဘာမှလည်း မရှိပါလား။
“ဘို့” တစ်လုံး ကုလားအုပ်နဲ့ ၊ “ဘို့” နှစ်လုံးကုလားအုပ်ကို ရှင်းပြတဲ့ စာကြောင်းလေးပါ။
အတိုကောက်သုံးခြင်းကလည်း ကစားနည်းတစ်မျိုးလို့ ပြောနိုင်ပါတယ်။
ရှေးခေတ်ကတော့ ကြေးနန်းရိုက်တာပေါ့။ အခုခေတ်မှာတော့ အွန်လိုင်းချပ်ရိုက်တာပေါ့။ အဲဒီအချိန်မှာ အင်္ဂလိပ်လိုရေးတတ်လေ့ရှိတဲ့ အတိုကောက်လေးတွေပါ။
I love U 2. = I love you too.
I would die4U! = I would die for you!
LOL= Laugh out loudly
အင်္ဂလ်ိပ်လူမျိုးခလေးလေးတွေ အရှေ့၊ အနောက်၊ တောင်၊ မြောက်အရပ်လေးမျက်နှာကိုသူတို့အရွယ်နဲ့ မမှတ်မိနိုင်တော့
ဒီလိုမှတ်ပါတယ်တဲ့ =Never Eat Sour Watermelon
ကျွန်မတို့ လူကြီးတွေအတွက်တော့ အဲလိုမှတ်ရတာက ပိုပြီးရှုတ်ထွေးသလိုဖြစ်နေမှာပါ။
ဒါကြောင့်လည်းပဲ ဒီလိုမှတ်သားနည်းဟာ သူ့ရဲ့သက်ဆိုင်ရာဘာသာရပ်ကို မိခင်ဘာသာစကားနီးပါး နားလည်ခံစားနိုင်သူများအတွက်ကော။ဘာသာစကားကို စသင်ကာစသူတွေအတွက်ကော၊ မူလမိခင်ဘာသာစကားကိုသုံးစွဲရာမှာကော အလွန်မှတ်လို့လွယ်ပြီး ၊ပျော်စရာကစားနည်းတွေဖြစ်လို့ ဘာသာစကားတိုင်းမှာ ရှိနေတာလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
အခုပြောတာလေးတွေကတော့ တကယ့်ကို အနည်းငယ်သော ဥပမာလေးတွေပါ။ နောက်ထပ် အများကြီး ရှိပါသေးတယ်။ စိတ်ဝင်စားစရာလေးတွေကိုလည်း ပြန်လည်မျှဝေခဲ့ပါဦးနော်။
ရေးသားသူ Myanmar Good Knowledg Co., Ltd at Tuesday, October 05, 2010
အမကောင်းမွန်ဝင်း.. အခုလို စာလုံးလေးတွေနဲ့ ကစားရတာ တစ်ခါတစ်လေမှာ စိတ်အရမ်းဝင်စားစရာကောင်းပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ စကားလုံးကြွယ်ဝမှ ပိုပြီး ကစားလို့ကောင်းတယ်မဟုတ်လား။ အင်္ဂလိပ်စာ လေ့လာတဲ့အခါမှာလဲ အထောက်အကူဖြစ်တာပေါ့လေ။ ဥာဏ်ကို ရွှင်စေပါတယ်။
News (သတင်း)ဆိုတာ အရှေ့ အနောက် တောင် မြောက်ဆိုတဲ့ အရပ်လေးမျက်နှာက လာတဲ့ အကြောင်းအရာတွေပါတဲ့။
ကောင်းတယ်ဗျာ၊ ဘလော့ကပေးတဲ့ ဗဟုသုတပေါ့။
ကျွန်တော်တို့ ကျတော့ ဖုံးနံပါတ်ကို မှတ်တာ ကျွန်တော့် ဦးလေး နာမည်က အုံးမြင့် ဖုန်းနံပါတ်က ၂၀၀၀၃၃ မှတ်ထားတဲ့ လကာင်္လေးက နှစ်ထောင်သုံးသုံး အုန်းမြင့် ဖုန်း လုံးလုံးမဆက်နဲ့ ၊ ကိုးကွယ်တဲ့ ဘုန်းကြီးကျောင်း ဖုန်းနံပါတ်က ၆၆၄၇၇၂ လကာင်္လေးက သန့်သန့်လေး နေတဲ့ ကျောင်း ၊ သောကြာ ၆ ဗုဒ္ဓဟူးလေး အဲလိုမှတ်တာ
ဟိုတပတ်ကတင် အဲ့ဒီအင်္ဂလိပ်လို အတိုကောက်
စာလုံးတွေ နက်ပေါ်မှာ လျောက်ရှာနေသေးတယ်။
ပို့လိုက်မိတယ် အစ်မရယ်.... ဟီး
ခုလို မှတ်တဲ့နည်းတွေက မေ့တတ်သူတွေအတွက်လည်း အထောက်အကူဖြစ်စေတယ်..
ဒီလိုနည်းနဲ့ဆို ဘယ်တော့မှ မမေ့တော့ဘူးနော်။
ကိုယ်ဆိုရင် ကိုယ့်ဖုန်းနံပါတ်တစ်လုံးကလွဲလို့ ဘယ်နံပါတ်မှ အလွတ်မရဘူး
ဥာဏ်က ဒီလောက်နည်းတား)
ဘွဲ့နှစ်ခု ရထားတဲ့ ညီမငေး..
အမကလေ ကိုကိုမောင်လို ဆရာပြောတာတော့ သိဖူး..............။ ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် နော်ဝေးစာကို အင်္ဂလိပ်လိုမှတ်တာ အမြဲ မှန်နေတာပဲ .. အသံထွက်ကတော့ လွဲပြီးရင်း လွဲနေတာပဲ..။
ဒါလေးက ငယ်ငယ်ကတည်းက မြန်မာကလေးတိုင်း မှတ်သားကျတဲ့ အေပြီ ဇွန် နဲ့ နိုဝင်ဘာ ဘာညာကွီကွ..Thirty days hath September, ...လို့ ဗိုလ်လိုမှတ်ကျပါတယ်တဲ့..။
(ROY G BIV)
ဒါလေးကျတော့ .. အခုလိုရာသီအစောပိုင်းမှာ တွေ့ရတက်တဲ့ သက်တံလေးအရောင်ကို မှတ်မိအောင် အစဉ်လိုက် မှတ်သားခြင်း..ပေါ့..။ ဗိုလ်လိုမှတ်တာပေါ့..။
နေဦး မြန်မာလို သတိယတယ်.. မှတ်ပုံ သားပုံ တွေကို အားလုံးသိပြီးသားပေမဲ့ သတိယအောင် ပြန်ရေးပြချင်လိုက်သေး (အမှန်က ကြွားချင်တာ.. ဟဲ) ။
..ဗု ဓံ သံ န လို့ စာပေကျမ်းတွေရဲ့ အစမှာ ရေးတာဟာ ( ဗုဒ္ဓံ ဓမ္မံ သံဂါ နမာမိ ) ဘုရားတရား သံဂါကို ရှိခိုးတာလို့ ဆိုပါတယ်..။
အရင်ပွင့်ခဲ့တဲ့ ဘုရား ၄ ဆူနဲ့ နောက်ပွင့်မဲ့ အရိမေတ္တေယျ ဘုရားရှင်များကိုလည်း ဒီလို မှတ်ပါသတဲ့ရှင်.. ( သန် ဂုဏ် ပ မ ယျ ) ပါတဲ့.. ။
တေ ဇ သု နေ မ ဘူ စန် နာ ဝိ ဝေ ဆိုတဲ့ ဘုရားလောင်းဖြစ်စဉ်များ ကို ကျွန်မတို့ ငယ်စဉ်က မှတ်ခဲ့သော်လည်း စာများကို သင်ပြီးရင် မှတ်ပြီးရင် တသက်မစွဲတာကို ကြေငြာသွားပါကြောင်း ။။
သံဂါ လို့ရိုက်တာ စာလုံးအမှန် ရှာမရလို့ပါ..။ ခွင့်းးးးးးးးးးးးလွတ်ပါ..။
ပန်းဗေဒါ ( ၈၈)
အံမယ်လေး ဘာသာ ဋီကာတွေ ချဲ့နေပြန်သကိုး
ဟီဟိ အနော်က တော့ ဦးကိုကိုမောင် ပြောတဲ့ တစ်ခုပဲ မှတ်မိတယ် ။ စစ်သားတို့ စည်းကမ်းတို့ ရဲ့ စာလုံးပေါင်းတွေရဲ့ အဓိပ္ပါယ်တွေတောင် မေ့ကုန်ပြီ။
အစ်မ လေ့လာထားတာတွေတော့ အားကျတယ်ဗြာ။
အဲဒီလို စကားလုံးလေးတွေကို တွဲပြီးမှတ်ထားရတာ ပိုပြီးမှတ်မိလွယ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ Network သင်ခဲ့ဖူးတုန်းက TCP/IP မှာ လည်း7Layer ရှိပါတယ်။ အဲဒါကို ဒီအတိုင်းကျက်ရင် မရတာများပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကျွန်တော်တော့် ဒီလိုတွဲမှတ်ထားခဲ့ဖူးပါတယ်..
အရှည်ကတော့ ပြောပြတော့ဘူး မေ့သွားလို့.. ဟဲဟဲ....